Dr. Tint Swe's Writings: March 2015
Q: ကန်တော့ပါဆရာ။ ကျမအသက်က ၂ဝ ပါ။ အိမ်ထောင်သယ်ပါရှင့်။ ခန္ဓာကိုယ်က အရင်တိုင်းပဲ ဖွံ့ဖြိုးသင့်တဲ့နေရာ မဖွံ့ဖြိုးလို့ပါဆရာ။ ယောက်ျားနဲ့ဘာညာကိစ္စတွေလည်း စိတ်မပါဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဟော်မုန်းဓာတ် အရမ်းနည်းနေလို့တဲ့။ ဟော်မုန်းဆေးသောက်ပေးလို့တော့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုဆေးမျိုး သောက်ရမလည်း ညွှန်ကြားပေးပါလားဆရာ။ နေတာက့့ မှာပါရှင့်။ မရိုမသေမေးမိတဲ့အတွက်လဲ ကန်တော့ပါဆရာ။
A: လိင်စိတ်နည်းတာလား။ အခုမှလား။ အိမ်ထောင်ကျကတည်းကလား။ ရင်သားနဲ့ တင်က သူများနဲ့မတူတာလား။ ဆေးစစ်ဖူးလား။ ရာသီမှန်သလား။
Q: တားဆေးသောက်။ လိင်စိတ်နည်းတာ အိမ်ထောင်စကျတည်းကပါရှင့်။ ရာသီကမှန်ပါတယ်။ ဆေးတခါမှ မစစ်ဖူးပါဘူးရှင့်။ တခါတလေ အရေးပေါ်တားဆေးတွေသောက်ပါတယ်။ အစကဆေးထိုးမလို့ပါရှင့်။ ဒါပေမယ့် ဆေးထိုးပြီးရင် အရမ်းဝလာမှာကြောက်လို့ မထိုးဖြစ်သေးတာပါ။ သမီးအဓိကသိချင်တာကလေ၊ ကန်တော့ပါဆရာရယ်၊ ရင်သားတွေ၊ တင်သားတွေ မဖွံ့ဖြိုးလို့ပါ။ ဟော်မုန်းဆေးတွေသောက်ရင် ဖွံ့ဖြိုးတယ်လို့ကြားဖူးလို့ပါဆရာ။ တကယ်လို့ အဲ့ဆေးတွေရှိရင် ညွှန်းပေးပါလားဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
A: မိန်းကလေးတွေမှာ သူများထက်ထူးပြီး ရင်သားသေးငယ်စေတဲ့အကြောင်းရင်း (၂) ခုရှိတယ်။ (၁) Genetic disorder မျိုးဗီဇနဲ့ (၂) Hormonal problem around puberty အပျိုဖြစ်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းကမောက်ကမဖြစ်လို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
မျိုးဗီဇကြောင့်ဆိုရင် ဆေးကုသလို့မရနိုင်ပါ။ ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင် Endocrinologist ဟော်မုန်းအထူကု ဆရာဝန် ကနေသာ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟော်မုန်းဆေးဆိုတိုင်း အားမကိုးပါနဲ့။ ကြောငြာဆေးတွေကို မယုံပါနဲ့။ နှိပ်နယ်နည်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းတွေကတော့ ဘေးထွက်ဆိုကျိုးကင်းနိုင်ပါတယ်။
Estrogen အီစထိုဂျင်ကို အမျိုးသမီးဟော်မုန်းလို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ အီစထိုဂျင်ကို မျိုးဥအိမ်တွေကနေ ထုတ်ပေးနေတယ်။ Estradiol ဆေးကို သွေးဆုံးအမျိုးသမီးတွေမှာ ခံစားရတာတွေ သက်သာစေဖို့ ပေးတယ်။ သတိထားဖို့က အသည်းမကောင်းသူ၊ သွေးယိုတတ်သူ၊ ရာသီမမှန်သူ၊ ဟော်မုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ မျိုးအိမ်ကင်ဆာနဲ့ လည်ပင်းကြီးကင်ဆာရှိသူတွေ၊ နှလုံးအတက်ခ်ရဘူးသူတွေ၊ သွေးခဲရောဂါရှိသူတွေက ဒီဟော်မုန်းဆေးနဲ့ မသင့်ပါ။ ဆီးချိုရှိသူ၊ သွေးတိုးရှိသူ၊ အဝလွန်သူ၊ အဆီများသူတွေနဲ့လည်း မသင့်ပါ။ ရေရှည်သုံးရင်လည်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်လည်းမသုံးရပါ။
ဟော်မုန်းဆေးကို အထူးကုဆရာဝန်ကမညွှန်ရင် မသောက်သင့်ပါ။ လိုတာဖြစ်လာနိုင်သလို မလိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေထဲမှာလည်း ဟော်မုန်းတွေ ပါနေတယ်။ အဲတာကြောင့် ဝတာ၊ မဝတာအပြင် လိင်စိတ်ကိုလည်း ပြောင်းစေတတ်တယ်။ ဆေးစာတွေပို့လိုက်ပါတယ်။ လက်လှမ်းမီတာကို လုပ်ပါလေ။
• Aphrodisiac လိင်စိတ်အားပေး အစာနဲ့ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/aphrodisiac.html
• Breast Beauty ရင်သားအလှ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/breast-beauty.html
• Breast Massage ရင်သားနှိပ်နယ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/breast-massage.html
• Butt exercises for women အောက်ပိုင်း ဖွံ့ထွားလိုလျှင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/butt-exercises-for-women.html
• Female Viagra အမျိုးသမီး ဗိုင်ယာဂရာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/female-viagra-2_24.html
• Libido in Women အမျိုးသမီး စိတ်နည်းနေခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/libido-in-women.html
ဆရာရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေထဲက Large breast ဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးပါပြီ။ အဲ့ဒီ့ အထဲက Olive သံလွင်ဆီနဲ့ လိမ်းရမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်လုပ်ရင် အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာအောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ မသိလို့ပါ။ ပြီးတော့ ရေမချိုးခင် လုပ်ရတာလား၊ လုပ်ပြီး အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲ၊ ပြီးတော့ Breast ကြီးအောင်လုပ်ဖို့ အချိန်ကာလ ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ရင်ရလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။
အမျိုးသမီးတွေ (ဘရာ) ကို အကြာကြီးဝတ်ထားရတာ ကျန်းမာရေးအရပြောရရင် သိပ်မကောင်းပါ။ တင်းကျပ်တာဆို ပိုဆိုးတယ်။ လေသလပ်တာ၊ အပေါ်ယံချွေးထွက်တာ နည်းစေယုံမက အထဲက သွေးပြန်ရည်စနစ် ကောင်းကောင်း မလုပ်ရရင် သွေးထဲက မကောင်းတာတွေ စွန့်ထုတ်တာကို နည်းစေတယ်။ ညအိပ်ချိန်မှ အတွင်းခံမဝတ်ဘဲအိပ်တာဟာ အဖြူဆင်းခြင်းမှာ မှိုရောဂါသက်သာစေတယ်။ အတွင်းခံမှန်သမျှ လှတာ၊ ဆန်းတာ၊ Sexy ဖြစ်တာအပထား ချည်ထည်က အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ရင်သား နှိပ်နယ်ခြင်း Breast Massage ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရင်သားကို သူ့သဘာဝအတိုင်း ဖွံ့ထွားလာမှာကို လှုံ့ဆော် အရွယ်အစားအားပေးဘို့ အဓိကဖြစ်တယ်။ ရလဒ်ကတော့ တခုမကပါ။ Sကြီးထွားစေဘို့သာမကဘဲ သွေးလှည့်ပါတ်တာ၊ သွေးပြန်ရည်လှည့်ပတ်တာ၊ အာရုံခံတာတွေကိုပါ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမယ်။ အမြင်ပိုလှစေမယ်၊ တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိနေအောင်ကိုလည်း လုပ်ပေးရာကျမယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လဲ ကိုယ်ဝန်ရှိရင် နို့နာမဖြစ်အောင်၊ ကလေးနို့တိုက်တဲ့အခါ အခက်အခဲမရှိအောင်ကိုလဲ ကာကွယ်ရာကျတယ်။ ကိုယ့်ရင်သားမှာ အလုံးအကျိတ် ရှိ-မရှိကို သိစေနိုင်လို့လဲ ကောင်းပါတယ်။ ရေမိုးချိုးတိုင်း ရင်သားကို တယုတယပွတ်သပ်ပါ။ ထိပ်ဖျားကို အသေအခြာပွတ်ပါ။ ရေချိုးပြီးရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ဖိအားသုံးပြီးသန့်ပေးပါ။ “ရင်သားအား မိမိဖါသာစမ်းသပ်နည်း” ရေးထာတာ ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ဖါသာလုပ်နိုင်တဲ့ အဆင့် ၄ ဆင့်နည်း (မူကွဲတွေလဲရှိပါတယ်)
၇ ရက်တပါတ်မှာ အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်လုပ်ပါ။ Breast Cream သုံးပါ။ အဆင့် ၁ ဆိုတာက သွေးပြန်ရည်စနစ်ကို ကောင်းစေအောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ အဆင့် ၂ နဲ့ ၄ အထိက သွေးပြန်ကြောထဲက သွေးတွေစီးတာ ပိုမိုကောင်းဘို့ ဖြစ်တယ်။ အဆင့် ၄ ကတော့ ရင်သားကိုထောက်ကူပေးနေတဲ့ အရွတ်တွေကို ကောင်းစေဘို့ပါ။
အဆင့် ၁။ လက်ချောင်လေးတွေကို နို့သီးထိပ်ကနေ ဝေးရာဆီကို ရွှေ့ပေးပါ။ သိပ်မဖိပါနဲ့။ မျက်တောင် ခတ်သလိုသဘော သာသာလေးရွှေ့ပါ။ ဖြေးဖြေးသာလုပ်ပါ။
အဆင့် ၂။ ရင်သားကို လက်မနဲ့ လက်လေးချောင်း ကားထားတဲ့ ပြိုင်နေတဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး၊ ဆွဲမသလိုနဲ့ ဖိချသလိုဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
အဆင့် ၃။ ရင်သားကို လက်မနဲ့ လက်လေးချောင်း အဝိုင်းပုံအနေအထားနဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး၊ နာရီလက်တံ လည်သလိုတခါ ပြောင်းပြန်လည်သလိုတခါ ညှစ်ပေးပါ။ နာအောင် မလုပ်ပါနဲ့။ မြန်စရာမလိုပါ။
အဆင့် ၄။ ရင်သားကို လက်မကအထက် လက်လေးချောင်းကအောက် ကားထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး၊ ခပ်ဖိဖိအင်အားနဲ့ အထက်ကြွစေအောင်လုပ်ပါ။
၁။ ရေချိုးပါ။ ရေခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ ရင်သားကို ပုဝါခပ်နွေးနွေးနဲ့ သုတ်ပါ။
၂။ ရင်သားဆီ-အဆီ လိမ်းပါ။ ရင်သား အရွယ်အစားအပေါ် မူတည်ပြီး အနဲ-အများ ချိန်ပါ။
၃။ ရင်သား တဖက်ခြင်းလုပ်ပါ။ လက်တဖက်၊ နှစ်ဖက် အဆင်ပြောသလို သုံးပါ။ ရင်သားကို အောက်ခြေကကနေ အထက်ဆီပင့်တင်ပါ။ အတွင်းဘက်ကို ဦးတည်ပါ။ ချိုင်းဘက်ကို မဟုတ်ပါ။ စက်ဝိုင်းပုံ အထက်ပင့် ဖြစ်ပါစေ။ ၂-၃ မိနစ်ကြာလုပ်ပါ။ ဆီ-အဆီ အကုန်စုပ်ဝင်သွားပါစေ။
၄။ နောက်တဖက်ကို အဲဒီနည်းအတိုင်းလုပ်ပါ။
တခါနှိပ်နယ်တာ အချိန်သိပ်ယူစရာ မလိုပါ။ ၂-၅ မိနစ်လို့ အကြမ်းဖျင်း ပြောနိုင်တယ်။ တနေ့ ၁ ခါရယ်မဟုတ်ပါ။ ရေးပြခဲ့တဲ့ နည်းတွေက ဆိုင်တွေမှာ သုံးတာတွေဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဖါသာလုပ်ရင် လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးကို တပြိုင်တည်း လုပ်နိုင်တယ်။ မှန်ထဲကြည့်လုပ်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်။ အခြေခံသိဘို့က ရင်သားတခုလုံးကို ထိမိစေဘို့ပါ။ အရောင်ရင့်အဝိုင်းလဲ ပါရမယ်။ နို့သီးထိပ်လဲ မကျန်စေရဘူး။ သဘာဝအတိုင်း ဖွံ့ထွားလာမှာကို နိုးဆွမှုဖြစ်စေအောင် လုပ်တာမို့ပါ။ အောက်ခြေပိုင်းဟာ ချိုင်းဘက်ဆီအထိ အမြီးလိုရှိတာမို့ ချိုင်းဘက်အထိ ရောက်ပါစေ။ နို့အုံကို ဆွဲမချပါနဲ့။ နို့သီးထိပ်ဆီ ဦးတည်ပါ။ အောက်ကနေ ပင့်တင်တာ ပိုလုပ်ပါ။ စက်ဝိုင်းလည်လုပ်ပါ။
• ပဲခူးက ရွှေသာလျောင်းဘုရားကို ရောက်ဖူးတယ်။ အတော်ကြာပါပြီ။ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ မုဒုံမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လျောင်းတော်မူ ဘုရားကြီးရှိသတဲ့။ လျောင်းတော်မူဘုရား တဆူတည်ရှိရာ မုံရွာ၊ ဗောဓိတထောင်ကိုတော့ လျောင်းတော်မူ ဘုရားရော လက်ရှိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့ ရပ်တော်မူဘုရားကြီးပါ မတည်မီကသာ ရောက်ဖူးတယ်။
• သုံးခေါက်ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကုသိနာရုံ (ကူစီနဂါး) မှာရှိတဲ့ ရုပ်ပွါးတော်ဟာ လျောင်းတော်မူပုံဖြစ်တယ်။ အဲတာကိုနမူနာယူပြီး၊ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ လျောင်းတော်မူ ရုပ်ပွါးတော်တွေကို တည်ထားကိုးကွယ်ကြာတာဖြစ်တယ်။
• မြတ်စွာဘုရား လျောင်းတော်မူပုံတော်တွေက နှစ်မျိုးရှိတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးဟာ Medical Body Positions ဆေးပညာသုံး ကိုယ်အနေအထားတွေ (Supine, Prone, Dorsal Recumbent, Lithotomy, Knee-chest, Sims', Trendelenburg, Modified Trendelenburg, Sitting, Fowler's) ထဲမှာ မပါဘူး။
• ပြီးခဲ့တဲ့ရသတ္တပတ်အဆုံးရက်တွေမှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီကို အလည်ရောက်တော့ ကိုဇော်ဝင်းနဲ့ မစုမွန်တို့အိမ်မှာ ခေတ္တခဏ နားကြတယ်။ သူတို့နဲ့ လူချင်း တခါမှမဆုံးဖူးသေးပေမယ့် အလွန်ကိုဖေါ်ရွေကြတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ဖရင်း၊ မစုမွန် (VOA) ကအသံဖရင်း။
• ရေဒီယိုတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြသူတွေနဲ့ လူချင်းတွေ့ဖူးတာကနည်းတယ်။ အသံတွေကိုတော့ အလွန်ကို ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ဖရင်းရယ်လို့ဖြစ်မလာခင် နှစ်တွေအများကြီးစောပြီး (အသံဖရင်း) ဆိုတာ ရှိတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ BBC, VOA, RFA, DVB ရေဒီယိုတွေကျေးဇူးကြောင့် များတယ်။
• တီဗွီအစီအစဉ်တွေ လွှင့်လာတော့ ရုပ်ရေကိုပါ ကြည့်သူတွေက မြင်လာနိုင်ကြတယ်။ DVB TV မှာ ကျွန်တော်ကို မြင်ရတယ်လို့ ပြည်တွင်းနေအမျိုးတွေက ပြန်ပြောကြတယ်။ တီဗွီသတင်းထောက်တွေကို အဆင်သင့်တိုင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့ မမေ့ပါ။ ကိုခင်မောင်လတ် သတင်းပို့တာက အများဆုံးဖြစ်မယ်။ တချိန်ကပေါ့။
• မစုမွန် (VOA) ကနေ လျောင်းတော်မူရုပ်ပွါးကို အန်တီအတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ အတင်းပေးလိုက်တယ် ပြောရမလား။ အားနာတဲ့သူထက် သူ့စေတနာကုသိုလ်ကသာလွန်တာမို့ လျောင်းတော်မူဘုရားဟာ အခုဆို ကျွန်တော်တို့အိမ်က ဘုရားစင်ပေါ်မှာ ရောက်နေပါပြီ။
• ကျွန်တော်က ဆေးပညာအဖြေတိုင်းမှာ ဝါကျလေးတကြောင်းသာဖြေရတာဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ရေးပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအရ မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဆေးပညာသဘောအရ ရေးတာပါ။ တကယ်တော့ ဆုတောင်းစရာမလိုတဲ့ ကံတရားတွေဟာ တကယ်ရှိတာပါ။
- ကနေ့ ပုလဲမြို့ ပါရမီရပ်က ဆေးခန်းနဲ့ နေအိမ်လေး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြသူတွေ လက်ဆုံစားထမင်းဝိုင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ကြပြီတဲ့။
- တယောက်က ကွန်မင့်မှာရေးပါတယ်။ ဆရာ့အိမ်ရှေ့က သာအေးကောင်းမှုဆိုတာကြီးကတော့ သဘောမခွေ့လှပါဘူးဗျာ။
- စစ်ကိုင်းတိုင်းမှူး (အခုစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်) ဦးသားအေးက ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရေကန်တခု လာဆောက်ထားပါသတဲ့။
- ရေစက်တော့ မဆုံပါရစေနဲ့။
31-3-2015 My house and clinic in Pale being cleaned (live reporting)
ကနေ့ ပုလဲမြို့ ပါရမီရပ်က ဆေးခန်းနဲ့ နေအိမ်ကို သန့်ရှင်းပေးကြသူများ
ဦးထွန်းသိန်း (ပုလဲ)၊ ဦးမြင့်ကြည် (ပုလဲ)၊ ဦးအောင်တင့် (ပုလဲ)၊ ဦးမြင့်ဝင်း (ပုလဲ)၊ သူရအောင် (ပုလဲ)၊ သန့်ဇင်အောင် (ပုလဲ)၊ ကိုထူး (ပုလဲ)၊ ကိုထက် (ပုလဲ)၊ ထွန်းပုလဲ (ပုလဲ)၊ ဒေါ်ခင်သန်း (ပုလဲ)၊ ဒေါ်အောင်သန်းကြွယ် (ပုလဲ)၊ ဒေါ်ခင်ခင် (ပုလဲ)၊ ဦးစိန်မောင် (ရိုး)၊ ဦးခင်မောင်သိန်း (နွယ်ရှောက်)၊ ကိုမြင့်ငွေ (နွယ်ရှောက်)၊ ထွန်းနိုင်ဌေး (နွယ်ရှောက်)၊ ကိုပေါပြည့်အောင် (နွယ်ရှောက်)၊ ဦးကံ (ရိုး)၊ ဦးစိန်မောင် (ရိုး)၊ ဦးမြင့်ငွေ (ရိုး)၊ ဦးဖုန်းကျော် (ရိုး)၊ ဦးနေလင်း (ရိုး)၊ ဦးဖိုးတုတ် (ရိုး)၊ ဦးမင်းနိုင်ထွေး (ရိုး)၊ ကိုဇေယျာညွန့်နိုင် (ကျောက်ကန်)၊ ဦးချိုဆန်း (ကျောက်ကန်)၊ ဟိန်းဟိန်းအောင် (မုံရွာ)၊ ဥဂ္ဂါလင်း (မုံရွာ)။ ဦးမိုး (လပုကန်) ဦးအောင်လင်း(ပုလဲ)။
30-3-2015 My house and clinic in Pale is being cleaned right now
ပုလဲက ကျွန်တော့်နေအိမ်နဲ့ဆေးခန်းပျက်ကို ရပ်ရွာမှာ မီးရေးထင်းရေးစိုးရိမ်ရလို့ အမျိုးတွေနဲ့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေက သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေကြတာကို ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ တိုက်ရိုက်ပုံတွေတင်နေတာတဲ့။
သန့်ရှင်းကျန်းမာကြပြီးသကာလ ရန်သူမျိုးမှန်သမျှက ကင်းဝေးကြပါစေ။
• သောက်စရာပါတဲ့ အစည်းအဝေးအပြီးဧည့်ခံပွဲမှာ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုအရိုက်ခံရတဲ့အထဲမှာပါနေမယ်။
• နိုင်ငံရေးစကားမပြောတော့သူ၊ သတင်းဆိုရင်နားမထောင်တော့သူဖြစ်နေမယ်။
• အဖွဲ့အစည်းအလံတော်ကို ကိုင်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံထဲမှာပါခဲ့တယ်။
• တောတွေတောင်တွေထဲမှာ ငပိရည်နဲ့ထမင်းစားခဲ့တယ်။
• ဟောတာပြောတာတွေမှာ အာဘောင်အာရင်းသန်ခဲ့တယ်။
• သွားလေသူလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခံရနိုင်တယ်။
• သာပေါင်းညာစားလို့ သမုတ်ခံရနိုင်တယ်။
• လူကြီးမင်းကို တနှစ်တာ၊ ဆယ်နှစ်တာ၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာ လုပ်တုံးက လုပ်ခဲ့သူရယ်လို့ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
• မြောင်းထဲရောက်မသွားသေးသမျှ လူကြီးမင်းဟာ ကျွန်တော့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ဆဲပါ။
Nyominlwin Pma ကိုယ့်မြို့အကြောင်းလည်း ကိုယ်ရေးရဦးမည်၊ ပျဉ်းမနားမြို့သည် ၀န်ထမ်းမြို့ဟု မဆလခေတ်က ပြောစမှတ်တွင်သည်။ စီးပွားရေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောစမှတ်ပြုလောက်အောင်မရှိ၊ သစ်၊ ဝါး၊ တောတောင်များရှိသည်၊ သို့သော် လူတိုင်းလုပ်နိုင်သည့်ကိစ္စမဟုတ်၊ ထိုအထဲမှ မျှစ်၊ မျှစ်ချဉ်ကတော့ လူအတော်များများလုပ်နိုင်သဖြင့်၊ မျှစ်ချဉ်ကောင်းထွက်သည့် မြို့အဖြစ်တော့ အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။့့
အရင်က တာဝန်နဲ့ ထိုင်းကို ခဏခဏခရီးသွားခဲ့ရဖူးတယ်။ အခေါက်တိုင်း မျှစ်ဝယ်ပါတယ်။ အခွံမခွါရသေးတာရရင် မျှစ်စို့ကြီးတွေကို ကျောပိုးအိတ်မှာ နိုင်သလောက်ထည့်ပြီး သယ်လာပါတယ်။
မာနယ်ပလောခေါ်တဲ့ အတိုက်အခံမှန်သမျှရဲ့ဌာနချုပ်ကိုလည်း ၁၉၉၅ မတိုင်ခင်မှာ သုံးခေါက်ရောက်တယ်။ NCGUB ရုံးမှာ ထမင်းစားရင် မျှစ်ပါတယ်။ ဦးခွန်မားကိုဘန်း (ကယန်း) ရဲ့လက်ရာပေါ့။
ဒေလီမှာနေရတုံးက ပုလဲကအသိတယောက် နေပြည်တော်မှာ တာဝန်ကျနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကို လက်ဆောင် ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မျှစ်စိမ်းကပို့မရတော့ မျှစ်တွေကို သူကိုယ်တိုင် လှီးစိတ်ပြီး၊ မျှစ်ခြောက် လုပ်ထားသတဲ့။ အဆင်မသင့်ချင်တော့ ကျွန်တော်က နေရာတခုထပ်ပြောင်းရပြန်လို့ လက်ဆောင်က မရောက်နိုင်တော့ပါ။ အရသာကောင်းတော့ ရနေသလိုပါပဲ။ ပျဉ်းမနားမျှစ်ကို စားတော့မစားဖူးသေးပါ။
• ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးပညာ သိလိုတာတွေကို အမေးအဖြေလုပ်ပေးနေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ အရင်ဆုံးတော့ (အီးမေးလ်) ကနေလုပ်တယ်။ အခုနေတဲ့အရပ်ကိုပြောင်းလာတော့ အရင် (အီးမေးလ်) က ပျက်သွားတာမို့ အသစ်လုပ်ရတယ်။
• (ဖေ့စ်ဘွတ်) ပေါ်လာတော့ (မက်ဆေ့ခ်ျ) နဲ့ (ချတ်) ကနေမေးတာတွေကိုဖြေပါတယ်။ (ကွန်မင့်) ကနေမေးတာတော့ တင်ထားတဲ့ (ပို့စ်) နဲ့မဆိုင်ရင် မဖြေပါ။
• အခုအသစ်တမျိုး တိုးပါအုံးမယ်။ VOA အသံလွှင့်ဌာနကနေ မေးလာတွေကို မကြာခင်မှာဖြေပါမယ်။ VOA မှာ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ရှိနေပြီးဖြစ်ပေမယ့် အခုအစီအစဉ်က အသစ်ပါ။ အခုဖြစ်နေတာကိုမေးတာမျိုး၊ ရာသီစာ ဝေဒနာတွေ ဖြစ်ပါမယ်။ ဆရာဝန်ကနေ ပြောချင်တာရွေးပြောတာမျိုး မဟုတ်ပါ။
• မေးတဲ့သူနာမည်တော့ ခွင့်ပြုရင်သုံးပါမယ်။ မသုံးစေချင်ရင်တော့ ကြိုတင်ပြောပါ။ နေရပ်ကိုတော့ သိချင်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါတွေက နေရပ်လည်းလိုက်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ၃-၄ သန်းမက ပြည်ပထွက်နေကြရလို့ တိုင်းပြည်လည်း သိချင်တယ်။ တချို့ရောဂါတွေက တချို့နိုင်ငံတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ ဆေးညွှန်ရတာလည်း နေရာသိမှ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ တချို့တိုင်းပြည်မှာ ဆရာဝန်ဆေးလက်မှတ်ပါမှသာ ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးရယ်လို့ ရှိလို့ပါ။
• လူတွေမှာဖြစ်နေတာအကုန်ကို ပါစေချင်တယ်။ မျိုးပွါးလမ်း၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်း မေးကြတာ အတော်ကိုများတယ်။ ရေဒီယိုက အများသုံး (မီဒီယာ) ဖြစ်လို့တော့ သုံးသင့်တယ်ထင်တာကိုသာ သုံးမှာပါ။ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ယဉ်ကျေးပြီး၊ မှန်ကန်တိကျ နားလည်သဘောပေါက်တာမျိုးသာ ရွေးသုံးပါမယ်။ တချို့စကားလုံးတွေက အများသဘောတူအသုံးဖြစ်မလာသေးပါ။ ဥပမာ သားအိမ်ခေါင်း၊ သားအိမ်ဝ၊ သားအိမ်လည်ပင်း။
• အသံ (ဖိုင်လ်) နဲ့လည်း မေးစေချင်ပါတယ်။ အသံကို VOA မှာ အသုံးပြုခွင့်ကိုပါ ရချင်တယ်။
• အမေးမဟော်သဓာဖြစ်ကြစေချင်ပါတယ်။ မေးနည်းစည်းကမ်းကိုလည်း ခဏခဏအသိပေးနေပါတယ်။ စည်းကမ်းညီရင် အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး၊ အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်။ စည်းကမ်းကို လိုလာရင်ပြင်ပါမယ်။ ၂ဝဝဂ ဖွဲ့စည်းပုံလို ပြင်မရတာမျိုး မကြိုက်ပါ။
• အခုတော့ VOA နဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ တရားဝင်ဖြစ်မှုအတွက် စလုပ်နေပါပြီ။ အဖြေနွားကျောင်းသားဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။ နွားကျောင်းသားဆိုတာ တကယ့်အရှိလူ။ ရောဂါတွေ အများဆုံးခံစားနေကြရသူ။ ၇၅% ထဲကလူတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
• မြန်မာထောက်လှမ်းရေးကတော့ -
ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှာ သင်္ချာပါမောက္ခလုပ်ရသူကို အလီမရသူလို့ မြက်ခင်းသစ်မှာရေးတယ်။ သင်္ချာဆိုရင် အလီရမှလို့သာ သိပုံရတယ်။
• မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့ -
မြန်မာရာဇဝင်ဆိုရင် အင်ပါယာထူထောင်နိုင်သူတွေကိုသာ ရုပ်တုကြီးတွေထုတယ်။
အတုယူစရာ မင်းသုံးပါးရှိတယ်။ တရုပ်ပြေးမင်း၊ ကုလာကျမင်းနဲ့ အနောက်ဖက်လွန်မင်းတွေဖြစ်တယ်။
• နေပြည်တော်အနားက ပျဉ်းမနားမှာ -
အစက မြင်းရုပ်ကြီးတွေရှိတယ်။ နောက်မှာ ဆင်ရုပ်တွေရောက်လာတယ်။ ဒိနောက်လူရုပ် (ယုတ်) တွေ ရောက်လာပြီလို့ ပြောကြတော့ အဲလိုမပြောရဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။
Photo from Which dictator killed the most people?
University of Hamburg ပညာရေးအားပေးတဲ့အမွေ ဘယ်ကနေရသလည်း
• ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ခံရပြီးကတည်းက ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ တဖွဲ့တည်းမှာ လက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအိမ်ကို မနေ့ကရောက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာရေတုံးကတော့ အစည်းအဝေးရှိလို့ (ယူအက်စ်) ကို ၄-၅ ခေါက်ရောက်တယ်။ ရောက်တိုင်း သူ့အိမ်မှာပဲတည်းတယ်။ အဲဒီတုံးက ဆရာစိန်ဝင်းဆီကို သူ့မိသားစုက ရောက်မလာသေးဖူး။
• ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်လာကတည်းက နိုင်ငံတကာခရီးမထွက်နိုင်တော့ပါ။ NCGUB ကိုလည်း ဖျက်လိုက်ရတယ်။ အခုမှသာ ဝန်ကြီးချုပ်ဆီပြန်ရောက်နိုင်တော့ပါတယ်။
• ခုတခေါက် ဝါရှင်တန်လည်းရောက်တော့ မီဒီယာထဲကမိတ်ဆွေတယောက်က NCGUB သမိုင်းကိုရေးပါလို့ နှစ်ခါပြောလာတယ်။
• ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအိမ်မှာ ရီစရာမောစရာလည်းပြောဖြစ်တယ်။ မီဒီယာထဲကနောက်တယောက်က ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကောင်းစားစဉ်က ပြည်ပရောက်တွေမကောင်းကြောင်း မုသားစာအုပ်တွေ ထုတ်တယ်။ ဆရာစိန်ဝင်းတို့ပါတီ PND က NLD ကိုအဖျက်ခံရင် အရံပါတီအနေနဲ့ ထောင်ထားတာလို့ ထောက်လှမ်းရေးကသိတယ်။ အဲဒီပါတီကို (အသက်ကယ်ပါတီ) လို့ ထောက်လှမ်းရေးစာအုပ်ကသုံးတယ်။ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက အဲလိုခေါ်တာတော့ သိပ်မနာပါဘူးဗျာတဲ့။ ကျွန်တော့်ကို တစ်အလီတောင် မရတဲ့သူလို့ ရေးတာ နာတယ်တဲ့။
• ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက သင်္ချာပညာတော်သင်ရလို့ ဂျာမဏီ (ဟန်းဘဂ်) မှာ (မာစတာ) ပြီးတယ်။ (ပီအိတ်ခ်ျဒီ) ဆက်တက်ဘို့ အမှတ်ကောင်းတော့ ဆက်တက်တာ ဦးနေဝင်းအစိုးရက ခွင့်မပြုဘူး။ မြန်မာပြည်ပြန်လည်း ရောက်ရောအဖမ်းတယ်။
• ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ပြီးခဲ့တဲ့ (ဆမစ်စတာ) တခုအတွက် ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှာ သင်္ချာပါမောက္ခ လုပ်လိုက်သေးပါတယ်။ မြန်မာထောက်လှမ်းရေးကတော့ အလီမရသူတဲ့။ ကြည့်ရတာ သင်္ချာဆိုတာ အလီတခုပဲလို့ထင်ပုံရတယ်။
Cannon Soldiers of Burma: A Part of Burmese History Largely Unknown to Its Modern Peoples & the World
• ဂျိမ်းစ်မြင့်ဆွေရေးတဲ့ မြန်မာပြည်ရောက် အမြောက်စစ်သည်များစာအုပ်က ပေါ်တူကီတွေဘယ်တုံးကစပြီး မြန်မာပြည် ရောက်သလည်းစတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ရေးထားတာဖြစ်တယ်။
• စာရေးသူက ကျွန်တော်တို့ NCGUB ဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးမှာ ဒါရိုက်တာ တနှစ်လောက်လုပ်ဖူးတယ်။ မုံရွာက ဘာသာပြန် စာရေးဆရာတယောက်က လိုတယ်ချင်လို့လှမ်းပြောထားတယ်။
• မနေ့က NCGUB ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအိမ်ရောက်တော့ အဲဒီစာအုပ်တအုပ်ပေးလိုက်တယ်။ မုံရွာကို ပို့ရအုံးမယ်။ • ဆရာစိန်ဝင်းက စာအတော်ဖတ်တယ်။ ခုတခေါက်သွားတော့ ပါဠိဖတ်နည်းသင်တန်းတက်နေသတဲ့။
• ကျွန်တော်ကတော့ သမိုင်းစာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်တယ်။
• မကြာသေးခင်က အတန်းတူသူငယ်ချင်း အသည်းအထူးကုဆရာဝန်တယောက် ဆုံးသွားခဲ့တယ်။
• အခုပဲ အတန်းတူသူငယ်ချင်းကပြောလို့ ကျွန်တော်တို့ (၇) နှစ်တိတိ ဆေးကျောင်းမှာ အတူတက်ခဲ့သူ (၇ဝ) ကျော်ထဲမှာ ၁၅ ယောက်တိတိ ဆုံးသွားကြပြီတဲ့။ ဆုံးတဲ့သူတွေအားလုံးက ယောက်ျားလေးတွေတဲ့။
• စီနီယာတန်းကတယောက် ဒေလီမှာဆုံးသွားတော့ နာရေးကိစ္စကို တတ်နိုင်သလောက်လေးကူညီခဲ့ရတယ်။
• တမြန်နေ့ကသိရတာ စီနီယာတန်းကတယောက် ဆုံးပြန်တယ်။ သူကြီးခေါ် ဒေါက်တာသန်းစိန် ဒေလီ WHO ရုံးမှာ ဒါရိုက်တာလုပ်တုံးက တမြို့ထဲမှာနေပေမယ့် သွားမတွေ့ပဲနေခဲ့တယ်။ ကိုယ့်က သူပုန်ပြည်ပြေးဆရာဝန် ဖြစ်နေလို့ အဲလို အစိုးရအလုပ်ဖြစ်ဖြစ် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေသူတွေကို တခါမှ မဆက်သွယ်ပဲ ရှောင်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောသူတိုင်းမှာ အန္တရာယ်ရှိကြတယ်။
•နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်အတွင်းမှာ စုစုပေါင်း (၁) ယောက်တိတိသာ လူစွမ်းကောင်းရှိခဲ့တယ်။
29-3-2015 Institute of Medicine, Mandalay 1965-72 batch Medical Fellowship Reunion
၁၉၆၅ ကနေ ၁၉၇၂ အထိ (၇) နှစ်တိတိ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်မှာ အတူစာသင်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲကို မတက်နိုင်လို့ စိတ်တော့မကောင်းပေမယ့် အားလုံးကိုသတိရတယ်လို့ အဝေးကနေ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်းတွေရေ့့
Photo from Dr. Khin Tint Swe
၂၉-၃-၂ဝ၁၅ မေရီလင်းရှိတဲ့ ကိုခင်မောင်စိုးမင်းနဲ့ မယုဆွေတို့အိမ်မှာတည်းခိုပြီး အင်ဒီယာနာပိုးလစ်ကိုပြန်မလာမီ။
ဓါတ်ပုံ = ဦးစိန်ဌေး
ဝါရှင်တန်နဲ့ မေရီလင်းကိုခရီးသွားရာကနေ အခုပဲ အင်ဒီယာနာပိုးလစ်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ ကျန်မိသားစုဝင်တွေက ကိုစိုးမင်း + မယုဆွေအိမ်မှာအိပ်ကြပြီး၊ ကျွန်တော်က ဦးစိန်ဌေးအိမ်မှာ အိပ်ပါတယ်။ အိပ်ယာထပြီး ပြန်မထွက်မီ ငါးချိတ်ပေါင်းမနက်ခင်းစာစားခဲ့ရတယ်။
28-3-2015 With my old associates, U Bo Hla Tint and Ko Aung San Myint at Ko Zaw WIn Hlaing (VOA)'s house
28-3-2015 Dr. Tint Swe, Ko Zaw Win Hlaing, U Aung Thein, Dr. Sein Win in Maryland
ဦးအောင်သိန်းကတော့ ဒီကမြန်မာမိသားစုတွေကိုပြောတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က အတိုက်အခံ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အမြဲတန်းအခံတွေချည်းဖြစ်နေရတယ်တဲ့။ အဲတာပြည်တွင်းအခြေအနေပဲ။
Two anti-military dictatorship brothers from Burma meet again after 25 years in Maryland.
My brother Sayadaw and I never discussed to do whatever we could to oppose to military rule but we can be seen together though we reside in different places which may be 1,000 miles away.
ကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက် နှစ်အစိတ်မကကြာပြီမတွေ့ကြတာ။ ဘယ်မှာနေနေ မတရားတာကိုရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင်တာမှာတူကြတယ်။ နေကြရတာ မိုင်ဘယ်နှစ်ထောင်ဝေးဝေး တိုင်ပင်စရာမလိုပါ။
28-3-2015 Burmese community in Maryland meet with Sayadaw U Teikhanyana and U Aung Thein. Among them are Dr. Sein WIn and Dr. Tint Swe of NCGUB.
ဝါရှင်တန်ဒီစီနဲ့ မေရီလင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေက အလွန်နွေးထွေးကြတယ်။ ရေဒီယိုတွေမှာလုပ်ကိုင်နေသူတွေ + အက်စတစ်ဗစ်တွေနဲ့ NCGUB အဖွဲ့ဝင်တွေက ဆရာတော်နဲ့ ဦးအောင်သိန်းတို့ကို တကူးတကလာပြီးတွေ့ကြတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
27-3-2015 Visiting Smithsonian's National Air and Space Museum
27-3-2015 U Teikhanyana, Ko Thein Hteik Oo (VOA) + Ma Thiri Kyaw Win, Ko Zaw WIn, Dr. Tint Swe in Maryland
ကနေ့ နေ့လည်မှာ ဆရာတော်ဦးတိက္ခဉာဏကို မေရီလင်းပြည်နယ်မှာ ကိုသိန်းထိုက်ဦး (VOA) + မသီရိတို့ နေအိမ်မှာ ဆွမ်းကပ်ပြီး၊ ရှေ့နေကြီးဦးအောင်သိန်းနဲ့အတူ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။
Ko Zaw WIn, Daw Mya Mya Aye, Akari Mya Mya Swe, Dr. Tint Swe, Yaza Tint Swe, Pinny Tint Swe
Photo by Ma Suu Mon (VOA)
၂၇-၃-၂ဝ၁၅ နေ့က ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ VOA အသံလွှင့်ဌာနမှာ လက်ပတောင်းမှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဆရာတော်နဲ့ ကျွန်တာ် နှစ်ပေါင်း ၂၅ ကျော်ကြာမှသာ ပြန်ဆုံဖြစ်ကြတယ်။
• မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ လစာတိုးသတဲ့။
• ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အစိုးရလစာ ပထမဆုံးရတာ အလုပ်သင်ဆရာဝန် (ဟောက်ဆာဂျင်) ဖြစ်တော့ တလမှာ ၂၁ဝ ကျပ်ရတယ်။
• အငယ်တန်းလက်ထောက်ဆရာဝန်က ၃၂ဝ ကျပ်။ လက်ထောက်ဆရာဝန်ကနေ မြို့နယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တော့ ၄၅ဝ ကျပ်ရခဲ့တယ်။ လုပ်သက် ၁၅ နှစ်မှာ ၇ဝဝ ကျပ်ရခဲ့တယ်ထင်တယ်။
• လူနာတယောက်ကို ဆေးတလုံးထိုး (တခါလာပြ) ၃ ကျပ်ယူတယ်။ နောက် ၅ ကျပ်၊ နောက်ဆုံးထွက်လာကာနီး ၁ဝ ကျပ်။ လစာနည်းဝန်ထမ်းတွေလာပြရင် ၅ ကျပ်ယူခဲ့တယ်။
• ရွှေတကျပ်သား ၃ဝဝ ခေတ်ကိုမှီတယ်။ စစ်ကိုင်းဆေးရုံမှာတာဝန်ကျတော့ ရွှေတကျပ်သား ၃ ထောင်။ မြန်မာပြည်က ထွက်လာတော့ ရွှေတကျပ်သား ၃ သောင်းခေတ်ကပါ။
တော်လှန်ရေးနေ့ ကာချုပ်မိန့်ခွန်း (သို့) ကိန်းဂဏန်များကပြောတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်း
• ကျွန်တော် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲက ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအလွတ်ရတယ်။ တနှစ်တခါ IPU မှာသွားပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေကြရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြောင်း တင်ပြနေခဲ့ရလို့ပါ။ ထောင်ထဲမှာ ကျန်သေးသူတွေ၊ ထောင်ထဲမှာသေသွားသူတွေ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေ၊ ပြည်ပထွက်ရသူတွေကို အတိုးအလျော့ ကိန်းဂဏန်း အတိအကျနဲ့ တင်ပြပါတယ်။
• ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုလဲ အလွတ်ရွတ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၂၃၅၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ ၉၇၊ အနည်းဆုံးတနေရာ အနိုင်ရတာက ၁ဝ ပါတီ။ ကိုယ့်ဖါသာဖျက်တာက ၁ဝ၂ ပါတီ၊ အစိုးရကနေ အပိတ်ခံရတာက ၃ ပါတီ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၃ နေရာဝင်မပြိုင်လို့ ဖျက်ရတာက ၆ ပါတီ၊ ဝင်မပြိုင်လို့ ဖျက်ရတာက ၃၁ ပါတီ၊ အပြီးမှာ ကျန်နေတာက ၉၃ ပါတီ၊ ထပ်အဖျက်ခံရတာက ၈၃ ပါတီ၊ နောက်ဆုံးမှာ တရားဝင်ရပ်တည်နိုင်တော့တာက ၁ဝ ပါတီ။
• အနိုင်ရတာမှာ NLD က ၃၉၂ နေရာ၊ ဒုတိယလိုက်တာက SNLD ၂၃ နေရာ၊ တတိယက ALD ၁၁ နေရာ၊ NUP တစည က ၁ဝ နေရာ။ အမတ်နေရာ အနည်းဆုံး ၁ နေရာနိုင်တာက ၂၈ ပါတီ။
• ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို စာရင်းဇယားနဲ့တော့ မှတ်မထားပါ။ ၂ဝ၁၂ တော့သိတယ်။
• အမျိုးသားညီလာခံ သမိုင်းစဉ်ကိုလဲ ရက်စွဲအတိအကျ မှတ်သားထားတယ်။ စတင်တဲ့နေ့စွဲ = ၉-၁-၁၉၉၆၊ ပြီးစီးတဲ့နေ့စွဲ = ၁၇-၁၂-၂ဝဝ၇၊ အချိန်ယူမှု = ၁၄ နှစ် ၁၁ လ၊ ၁၂ ရက်။
• အမျိုးသားညီလာခံလုပ်တဲ့ သမိုင်းစဉ်ကိုလဲ ရက်စွဲအတိအကျ မှတ်ထားပါတယ်။
- ရွေးကောက်ခံရတဲ့အမတ်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဘို့ တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ ၂၇-၇-၁၉၉ဝ မှာ နဝတ က ကြောညာခဲ့တယ်။
- တကယ်တန်း ဖွဲ့စည်းပုံရေးတဲ့အခါ အမျိုးသားညီလာခံ အစပိုင်းမှာ အမတ်တွေဟာ ၁၅့၂၄% တက်ခဲ့ကြရပေမဲ့၊ နောက်ဆုံး ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံမှာ ၁့၃၈% သာ ပါရတော့တယ်။
• ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်တဲ့အခါ အင်မတန်ထူးခြားလှတဲ့ ကိန်းဂဏန်လဲ မမေ့ပါ။
- ၁၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာ တောင်ငူမဲဆန္ဒနယ်မြေမယ် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူပေါင်း ၇၄၆၄၆ ယောက်၊ ထောက်ခံမဲပေးသူပေါင်း ၇၁,၂၂၇ + ကြိုတင်မဲ ၄,၉၇၇ = ၇၆၂,ဝ၁၄၊ ရာနှုန်းအားဖြင့် ၁ဝ၂% ကနေ ထောက်ခံတယ်လို့ ပါခဲ့တယ်။
• နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ လူပေါင်း ၁၃,၄ဝဝဝ ယောက် အသက်ဆုံးပါးခဲ့ရတယ်ဆိုတာ နောက်ဆုံးဂဏန်းဖြစ်တယ်။
• ကျွန်တော် မေ့နေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတခုရှိပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ သေဆုံးပျက်စီးမှုတွေကို အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ တိတိကျကျထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာမှာ လူတွေအပြင်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဘဲသာမက ကွဲသွားခဲ့ရတဲ့ ဘဲဥအရေအတွက်လဲ တိတိကျကျပါခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မေ့နေတယ်ဗျာ။
- ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ထောက်ခံမှု ၉၂့၄၈% ရှိတယ်ဆိုတာလေး မေ့နေတာကို ၂၇-၃-၂ဝ၁၄ နေ့က တပ်မတော်နေ့ (တော်လှန်ရေးနေ့) ကာချုပ်က မိန်းခွန်းမှာထည့်ပြောတာ ကြားလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အရင်တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့အရပ်ဒေသမှာ ကျွန်တော်နဲ့တွဲလုပ်ခဲ့သူတွေကနေ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေ့ရတယ်။
(၁) ပုလဲမြို့နယ် မင်းတိုင်ပင် R.H.C အိုင်းမကျေးရွာမှာ ဝမ်းလျှော/ပျက်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း အခမဲ့ဆေးဝါးကုသခြင်းလုပ်ငန်းမျးဆောင်ရွက်နေစဉ်
ပုလဲမြို့နယ်ကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး တဖက်နိုင်ငံမှာနေခဲ့ရတုံးကလည်း အဲလိုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခဲ့တာကိုလည်း အမှတ်ရနေမိနေတယ်။
(၂) ၃ဝ-၉-၂ဝဝ၈ နယူးဒေလီ Hastal အရပ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို စိတ်ကျန်းမာရေး ဟောပြောခဲ့စဉ်
Photo (1) from Kaung Kin Pyar, Mingdaingbin
Photo (2) by Yamuna clinic staff, New Delhi
မုံရွာက တူတယောက်ကတင်ထားတယ်။ ခေတ်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ဖယောင်းတိုင်ကို ကျုပ်တို့ မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး။ နောက်တယောက်လည်း မုံရွာမှာ မိုးတွေရွာလို့ မီးပျက်သတဲ့။
• ပညာဆီမီးဆိုတာ တယ်မှန်တာပဲ။
• ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက ၅ တန်းကစပြီး၊ တညမှာ ဖရောင်းတိုင်တချောင်းကုန်အောင် စာကြည့်ရတယ်။ အဖေချမှတ်ထားတဲ့ စာကြည့်စည်းကမ်းအရပေါ့။ အဲဒီတုံးက ဖရောင်းတိုင်တချောင်းကုန်ရင် တနာရီပဲ။ စံချိန်ကိုက်။
• တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်ကာစက ဖရောင်းတိုင်ဝယ်လို့ရသေးတယ်။ အဝယ်ရခက်လာတော့ ရေနံဆီမီးခွက်နဲ့ စာကြည့်ရတယ်။ (မဆလ) ခေတ်ဖြစ်လာတော့ ရေနံဆီပါရှားကုန်ရော။
• လျှပ်စစ်မီးသွယ်နိုင်လာတော့ အိမ်မှာ နယ်ကနေကျောင်းလာတက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်းများတော့ အခန်း နှစ်ခန်းကြားကထရံမှာ လေးထောင့်ပေါက်ဖေါက်ပြီး၊ ၂ ပေမီးချောင်းလုပ်ပေးထားတယ်။ နှစ်ခန်းလုံး မီးလင်းအောင်လို့။ မီတာကြေးက တယူနစ်ကို ၆၅ ပြား။
• အတန်းကြီးလာတော့ စာဖတ်စရာတွေများလာလို့ တညတနာရီနဲ့မရတော့ဘူး။ မီးပျက်တာသိပ်မများလို့ ဆယ်တန်းကို ရှောရှောရှူရှူအောင်ပါတယ်။
• နောက်ပိုင်းကျောင်းသားတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ထက် ဆန်းပြားလာတယ်။ ဘက်ထရီမီးတို့၊ အင်ဗာတာတို့၊ ဆိုလာတို့ ပေါ်လာတာကိုး။
• မီးမပါ ပညာမရဘူး။ ခက်တာက အခုရနေတဲ့ပညာက ဖရောင်းတိုင်မီးနဲ့ရှာရတာထက် ညံ့နေတယ်တဲ့။
• ကိုင့်း့ ရေနံဆီမီးခွက်ခေတ်ကို ပြန်သွားကြစို့။
နက်ဖြန် ဖက်ဆစ်ကို တော်လှန်ကြမယ်။
မကွေးတိုင်း၊ သရက်မြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျေးရွာ၊
Photo from Paukkalay Tayet
PLA holds night live-fire drills near border with Myanmar
• တရုပ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ တရုပ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ကျည်အစစ်သုံးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်
• ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ South China Morning Post သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာကို ဒေသစံတော်ချိန် ၂၆-၃-၂ဝ၁၅ နေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၂ဝ မိနစ်က ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ထားတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
• People's Liberation Army ခေါ် တရုပ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကနေ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာ အဲလိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာကို China Central Television တီဗွီဌာနရဲ့ စစ်ရေး (ချယ်နယ်) ကနေ အင်္ဂါနေ့ညက ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ အမှတ် (၁၄) Army Corps ရဲ့ တပ်ရင်းတခုကနေ လတ်တလောပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Large-scale live-fire drill အကြီးစား ကျည်အစစ်သုံး စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုလို့ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ တပ်တွေရဲ့ Combat readiness at night ညပိုင်းမှာ အသင့်ရှိနေမှုအတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာ flamethrowers မီးထွက်စစ်လက်နက်တွေ ကိုင်ဆောင်ထားတာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
• တရုပ်လူမျိုး ဝေဖန်သူတွေက ဒီလိုလုပ်ရတာဟာ သူ့နိုင်ငံသားတွေက မြန်မာစစ်လေယာဉ်ကနေ ဗုံးချလို့ လူတွေ သေကျေတဲ့အပေါ်မှာ အစိုးရကနေ လုံလောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ဖူးလို့ဝေဖန်မှုတွေကို ပြေငြိမ်းစေဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Tint Swe: How to address people အမည်သညာခေါ်စရာကား
Comment: ဒါက ဒီလောက်တောင်အခက်တွေ့စေသလား။
• နမူနာတွေကို အရင်စာတွေထဲမှာ ရေးဖူးပါတယ်။
• အရပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် ထူးသင့်ရင်ပြန်ထူးမှာပါ။ စာနဲ့ဆိုရင် သင့်မြတ်တာကိုသာ ရေးသင့်ပါတယ်။
• ပြောသလိုမရေးလည်း ဘာမှတော့ လုပ်မရပါ။ မေးခွန်းနားလည်ရင်တော့ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် မဖြေတာရယ်လို့ မရှိပါ။ ဆရာမလို့ခေါ်လည်း ဖြေရတာာပါပဲ။
• ဒေလီမှာ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုသင်တန်းတခုမှာ သင်တန်းသားတွေကို ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအခေါ်ခံရတာကို မကြိုက်ဆုံးလည်းလို့ သင်္ခန်းစာတခုလုပ်တယ်။ ချင်းအမျိုးသား တယောက်ကနေ (ချင်းပုပ်) လို့ခေါ်ခံရင် မကြိုက်ဆုံးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီနောက် ဘယ်သူကမှ (ချင်းပုပ်) လို့ မခေါ်ကြတော့ပါ။
• Myopia (မိုင်အော့ပီးယား) ခေါ်တဲ့ အနီးမြင် (အဝေးမှုံ) ဖြစ်တာကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃ဝ ကြာ ဆန်းစစ်လေ့လာလို့ သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့နေရာဒေသတွေမှာ ၈ဝ-၈၉% အထိများတယ်။
• စာသင်ခန်းတွေမှာ အလင်းရောင် မလုံလောက်တာက အကြောင်းတချက်ဖြစ်တယ်။
• နေရောင်မလုံလောက်သူတွေမှာ ဗီတာမင် (ဒီ) လည်းနည်းလို့ Rickets အရိုးပျော့ရောဂါလည်း ရစေနိုင်တယ်။
• စင်္ကာပူ၊ တိုင်ဝမ်နဲ့ တရုပ်ပြည်တွေမှာ (မိုင်အော့ပီးယား) ဖြစ်နေတာ ကပ်ရောဂါလိုပဲ။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖြစ်နှုန်းတိုးလာနေတယ်။ ဘာလို့အဲလိုမှုံကြသလည်း လေးလာမှုတွေ အနှစ် ၁၅ဝ ရှိပေမယ့် တိတိကျကျမသိရသေးပါ။
• နေရာင်အရနည်းတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာပိုဆိုးတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာ အချိန်ပိုကြာတဲ့ကျောင်းသားတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
• နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အရ ဗီတာမင် (ဒီ) နည်းတာထက် နေအလင်းရောင်နည်းတာကြောင့် (မိုင်အော့ပီးယား) ပိုဖြစ်တာကို သိလာရတယ်။
• အဲတာကြောင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်က အနီးမှုံဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောရတော့မယ်။
• တဖက်သပ်စွပ်စွဲတာ မသင့်ပါ။ မျိုးဗီဇကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ ကျွန်မက ဒီနေ့မှာကိုယ်ဝန် ၁၈ ပတ်ပြည့်ပါတယ်။ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိလိုတာ အချို့ကို မေးမြန်းခွင့်ပြုပါရှင်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကောက်ညှင်းမစားသင့်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ ကောက်ညှင်း နှစ်ကြိမ်စားမိပါတယ်ရှင်။ ကောက်ညှင်းစားတာက ကလေးကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်မလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အိပ်စက်တဲ့အခါ ပက်လက်အနေအထား လုံးဝအိပ်လို့မရဘူုးလို့လည်း ပြောကြပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဘေးတစောင်းအိပ်တာ ပိုများပေမယ့် တခါတရံမှာ အဆင်မပြေတာကြောင့် ပက်လက်အနေအထား အိပ်မိတာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ပက်လက် အနေအထား အိပ်စက်မိတဲ့အခါမှာ ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလားရှင်။
၂။ ဆရာ သမီးနာမည်က့့ ပါ။ ကိုယ်ဝန်က ၄ လရှိပါပြီ။ သူများတွေကပြောတယ် နွားနို့သောက်ရင် အထဲကကလေး မွေးလာရင် အသားဖြူ တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဆရာ။
၃။ ကျွန်မအသက်က၂၃ နှစ်ပါဆရာ အခုကိုယ်ဝန် လွယ်ထားပါတယ်ဆရာ။ မီးတွင်းထဲမှာ ဘယ်လို နေထိုင်သင့်လဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ လူကြီးတွေကပြောတယ် တစ်လတိတိ ခေါင်းမလျှော်ရဘူး ပြောတော့တော်တော်စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ရေကိုင်ရင်တောင် ရေနွေးကိုပဲကိုင်ရမယ်၊ ဆပ်ပြာဆိုလည်း ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာ ပဲကိုင်ရမယ်၊ အဲကွန်းခန်းထဲ မနေရဘူး၊ အစားအသောက်ကအစ အစုံမစားရဘူး ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက အမှန်တွေပဲလားဆရာ။ ပြီးတော့ သွေးသားသန့်အောင် ဘယ်လိုအရာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါသလဲရှင်။ မီးတွင်းထဲမှာ သွေးသန့်အောင် အရက် နဲ့ဆေးနဲ့ပါသောက်ရမယ်တဲ့ဆရာ။
၄။ ဆရာရှင့် သမီး ကိုယ်ဝန်က ၅ လနီးပါးရှိနေပြီလို့ ကိုယ်ဝန်သွားအပ်တော့ Doctor ပြောပါတယ်၊ ကလေး နှလုံးခုန်သံပါ ကြားရပါတယ်တဲ့ဆရာ။ သမီးသိချင်တာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေ ညနေ ၅ နာရီ ကျော်ရင် ရေမချိုးရဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ သမီး အလုပ်ချိန်က နေ့လည် ၂ နာရီကနေ ည ၁၁ ထိ မို့လို့ပါ။ ညနေ ၅ နာရီကျော်ရင် ရေမချိုးရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ။ နောက် ငှက်ပျောသီးကို ကိုယ်ဝန်ရင့်လာရင် မစားရဘူးတဲ့၊ ကလေးက အထဲမှာထွားနေရင် မွေးရခက်လို့တဲ့ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။
မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။
ကိုယ့်ကလေးတွေ နွားနို့သောက်ချင်အောင် လှည့်ပါတ်လိမ်ညာပြောခဲ့ရတာတွေကို အမှတ်ရလာတယ်။ ဆေးပညာစာကိုတော့ ဆန်းစုမှုတွေလုပ်ထားတဲ့ သူများနိုင်ငံက အထောက်အထားတွေကိုသာရေးပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက ပိုပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပြောကြတယ်။
ကိုယ်ဝန်အတွက် ရေးချိုးတာကို ဆရာဝန်တွေက ကန့်သတ်မှုမလုပ်ပါ။ ရေချိုးတာက အကျင့်လိုလဲဖြစ်သလို အကျင့်မဟုတ်ဘဲ ရေချိုးလို့လဲ ဘာမှ မဖြစ်စေပါ။ ချိုးတဲ့ရေရဲ့ အပူချိန်ကိုသာ ကြည့်စရာလိုပါမယ်။ ကိုယ်အပူချိန်နဲ့ တူလေကောင်းလေပါ။ ခပ်နွေးနွေးချိုးတတ်သူတွေက ၁ဝဝ ဒီဂရီ (အက်ဖ်) ရှိတဲ့ရေနဲ့ ချိုးသင့်ပါတယ်။ ရေချိုးရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အားလုံးသိပါမယ်။ သန့်ရှင်းရေးအပြင် ပင်ပန်းနေတဲ့ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပါမယ်။ ခြေထောက်ရောင်နေသူတွေလဲ သက်သာစေနိုင်တယ်။ ရေမြွာရည်နည်းနေသူတွေမှာ တိုးလာစေမယ်။ စောမွေးမှာကိုပါ တားနိုင်လောက်ပေါသေးတယ်။ စိုးရိမ်ှုတွေ သက်သာစေမယ်။ ရေကူးချင်သူတွေ ကူးပါလေ။
ငှက်ပျေားသီးလဲ စားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးထွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ကလေးဟာ အချိုးအစား ကျကျထွားလို့ အမွေးခက်တာ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းက ရှိသင့်တာထက် ပိုကြီးနေရင်သာ ခက်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အတူနေတဲ့အနေအထားအရ ကလေးဟာ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ပါ။ ဖခင်ဆီကလာတဲ့ X နဲ့ Y (ခရိုမိုဇုမ်း) တွေကနေသာ ကလေးရဲ့လိင်ကိုသတ်မှတ်တယ်။
၂။ ကလေးနှလုံးခုန်သံကနေ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးခွဲသိမယ်။ မဟုတ်ပါ။ ဘယ်လိင်ဖြစ်ဖြစ် နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ တမိနစ်မှာ ၁၂ဝ ကနေ ၁၆ဝ ရှိတယ်။
၃။ လက်ကိုခေါင်းပေါ်မြှောက်တင်ရင် ကလေးကို ချက်ကြိုးပတ်နေတတ်တယ်။ မဟုတ်ပါ။ အထဲကကလေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့်သာ အဲလိုဖြစ်နိုင်တယ်။
၄။ ကိုယ်ဝန်ပေါ်ရင် ကလေးက ကြီးမယ်။ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်တိုင်းမှာ အဲလိုမဟုတ်ပါ။ အရပ်မြင့်သူတွေက ကိုယ်ဝန်သိပ်မပေါ်တတ်ပါ။ ရေမြွာရည်များတာနဲ့ အမွှာကိုယ်ဝန်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်က သူများထက်ကြီးမယ်။
၅။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံး မျက်နှာမှာ တင်းတိတ်ပေါ်တာဟာ (ကိုယ်ဝန်မျက်နှာဖုံး) ရာသက်ပန်ကျန်မယ်။ မဟုတ်ပါ။ မွေးပြီး ပြောင်း၊ ပျောက်ပါမယ်။
၆။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး အတူနေတာ အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ မဟုတ်ပါ။ (စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။)
၇။ ကိုယ်ဝန်ရှိစ အိပ်ရာထဈေဒနာတွေက မနက်ထမှာသာဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ပါ။ (စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။)
၈။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ရေမချိုးနဲ့။ မမှန်ပါ။ ရေချိုး သန့်ရှင်းဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၉။ Linea nigra ခေါ်တဲ့ ချက်ကနေ ဆီးစပ်အထိတန်းနေတဲ့ အရောင်ရင့်မျဉ်းကြောင်းကနေ ယောက်ျားလေး-မိန်းကလေး သိတယ်။ ဖြောင့်ရင် ယောက်ျားလေး၊ ကောက်ရင် မိန်းကလေး။ ချက်အထက်ရောက်ရင် ယောက်ျားလေး။ မဟုတ်ပါ။
၁ဝ။ အသားအရေနူးညံရင် မိန်းကလေး၊ ခြောက်နေရင် ယောက်ျားလေး။ မဟုတ်ပါ။
၁၁။ ဆံပင်ပါးပြီး မွဲခြောက်ရင် မိန်းကလေး။ များပြီး အဆီပြန်နေရင် ယောက်ျားလေး။ မဟုတ်ပါ။
၁၂။ အချိုကြိုက်နေရင် မိန်းကလေး။ အငန် နဲ့ အချဉ်ကြိုက်ရင် ယောက်ျားလေး။ မဟုတ်ပါ။
• မန္တလေးဆေးကျောင်းတက်ရတော့ မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း မြို့နယ်အစုံက ကျောင်းလာတက်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရလာတယ်။ ရှမ်း၊ ကချင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်ကကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်။
• အခုပုံလေးကို သူငယ်ချင်းဆီကရတာ။ ပခုက္ကူ၊အုပ်စုရဲ့ပုံ။ သူတို့တတွေက ကျွန်တော်တို့ မုံရွာအုပ်စုနဲ့ မတူတာက သူတို့က အဲလိုစုစည်းမှုပိုရှိတာဖြစ်တယ်။ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူ၊ ရေစကြို၊ မြိုင်ကနေ ကျောင်းလာတက်သူတွေပါတယ်။
• သူတို့မှာ နောက်ထပ်တူတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်။ စကားပြောတာ တချို့အသံထွက်တွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့ မတူကြဘူး။ အရိုးခံနဲ့ တောဆန်ကြတယ်။ ပွင့်လင်းတယ်။ ဆရာတင်မိုးအရပ်ကလူတွေပေါ့။
• ကျွန်တော်တို့ မုံရွာသားတွေကို ရွာသစ်ကြီးသားက မှတ်ချက်ပေးတာတခုရှိတယ်။ မင်းတို့မုံရွာသားတွေမှာ တူကြတာ သုံးချက်ရှိတယ်တဲ့။ ပန်းချီဆွဲတယ်။ ဈေးအလွန်ဝယ်တယ်။ ကားမောင်းရင် အမြန်မောင်းကြတယ်တဲ့။ ကိုဌေးလှိုင် (ကွယ်လွန်) နဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြောတာ။
• ဒီအုပ်စုနဲ့ မုံရွာအုပ်စုက အတော်နီးစပ်တယ်။ အညာသားအစစ်၊ တောသားအစစ်တွေဆိုပိုရင်းနှီးကြတယ်။
• အခုဓါတ်ပုံပို့သူဆိုရင် အထူးခြားဆုံးပဲ။ သူ့အပြောနဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေက ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တာတွေ။ ရီစရာတွေဆို ခုထိကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သတိရတုံးရှိသေး။ သူကပဲ ကျွန်တော့်ကို မယ်ဒလင်တီးသင်ပေးတာ။ သီချင်းကြီး ၂ ပုဒ်တိတိ တီးတတ်သေးတယ်။
ဒီအိမ်လေးကလည်း ဆရာ၏အစွမ်းထက်တဲ့ ဓားတစ်လက်ကြောင့်် တစ်နယ်လုံးကျန်းမာခဲ့ကြလို့ ဆရာ့ကို မျှော်နေကြပါတယ်ဗျာ။
• ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ခွဲစိပ်ဓားလည်းကိုင်ဖူးတယ်။
• ပင်နီတိုက်ပုံနဲ့ ယောလုံချည်လည်းဝတ်ဖူးတယ်။
• ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ကုတ်အင်္ကျီလည်းဝတ်ဖူးတယ်။
• အခုတော့ ဝတ်ချင်တာဝတ်ပြီး၊ ကိုင်စရာမပါ လက်ချောင်းလေးတွေသာ အသုံးပြုနေရတယ်။
• နေချင်တဲ့ဆီမှာလည်း မနေရသေးပါ။
• ဓားရောအပ်ပါ ကိုင်လို့နိုင်ပါသေးတယ်။
• မနေ့ကပဲ အင်တာဗျူးမှာပြောပါသေးတယ်။ အမြင်ရှိရမည်ဆိုတာနဲ့မပြီးတဲ့အကြောင်း။
• လုပ်ချင်စိတ်တခုတည်းနဲ့ မရ။ လုပ်တတ်တာနဲ့လည်း မပြီး။ လုပ်ခွင့်သာဖို့ကလည်း လိုပါသေးတယ်။
• ဤသုံးမျိုး ချက်မပိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ နောင်ပြင်နိုင်ဖို့ရာ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
Photo from Ko Ko Aung
• လူသူမနေ ပူနွေနှစ်ဆယ်ခေါက်၊
• သစ်ပင်တိုး မိုးနှစ်ဆယ်ခေါက်၊
• အမိုးထရံဆန်ခါပေါက် ဆောင်းနှစ်ဆယ်ခေါက်၊
• အိမ်ကိုမရောက် နွေမိုးဆောင်းနှစ်ဆယ်ခေါက်၊
• စိတ်ရောက် အခေါက်နှစ်ထောင်လောက်။
• ဒီစမ်းသပ်ခန်းလေးထဲမှာ အားကိုးတကြီးနဲ့ လာရောက်ပြသကြဘူးတဲ့လူနာတွေ၊
• ဒီကုတင်ပေါ်မှာ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူကြဘူးတဲ့လူနာတွေ၊
• သူများတက္ကသိုလ်တွေမှာ မမေ့စရာနေရာတွေ၊ အထင်ကရတွေကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ကံ့ကော်ပင်၊ သစ်ပုပ်ပင်၊ တမာလမ်း၊ ထနောင်းလမ်း။
• မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်မှာတော့ စိတ်ကူးယဉ်စရာရယ်လို့ မရှိခဲ့ပါ။ ၁၉၆၅-၇ဝ ဝန်းကျင်တုံးက ဆေးကျောင်းရှေ့မှာ ကုက္ကိုပင်နဲ့ စိန်ပန်းပင်သာရှိတယ်။ ဗာဒံပင်ရှိတယ်။ လွမ်းစရာရယ်လို့ ပြောမရတာတွေပါ။ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ကျောင်းဆောင်တွေမှာလည်း ထူးခြားတာရယ်လို့ အမှတ်မထားမိပါ။ စာဖွဲ့စရာလို့လည်း မအောက်မေ့ခဲ့ပါ။
• အခု စိန်ပန်းတွေပွင့်နေပြီဆိုတော့ ဆေးမန်းက စိန်ပန်းကို လွမ်းလာမိတယ်။ အနီရဲရဲပါ။ အပြာမရှိပါ။
• စိန်ပန်းဟာ တော်ဝင်မဟုတ်၊ ထီးသုံးနန်သုံးမဟုတ်ပါ။ ပန်ရတဲ့ပန်းလည်းမဟုတ်။ ဘုရားပန်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အရိပ်ကောင်းရတဲ့အပင်မျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။
• ဘာပဲဖြစ်ြဖစ် ကိုယ့်ကျောင်းပန်းကို လွမ်းပါတယ်။ ပုံဆွဲဝါသနာပါတော့ ရှုမျှော်ခင်းဆွဲရင် စိုစိမ်းပြာမှိုင်းနေတဲ့ နောက်ခံမှာ နီစွေးနေတဲ့ စိန်ပန်းပွင့်ကိုင်းလေးထည့်လိုက်ရင် ဆွဲဆောင်အားကောင်းလာတယ်။
• သူငယ်ချင်းတွေအကုန်ပါ ထည့်မြင်ကြည့်တော့မှသာ ပန်းချီကားလေးက ပြည့်စုံသွားတော့တယ်။
Sofosbuvir (Sovaldi) ဆေးနဲ့ Harvoni ဆေးတွေက အသည်းရောင် (စီ) အတွက် အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှလုံးခုန်မမှန်တာအတွက်ပေးတဲ့ဆေး Amiodarone တွဲသောက်ရင် ဓါတ်ပြုမှုကြောင်း အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။
ဆေးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီ Gilead ကနေ လူနာ ၉ ယောက်မှာ အဲလိုသောက်လို့ Symptomatic bradycardia နှလုံးခုန် အလွန် နှေးသွားတာတွေ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တယောက်ဆုံးသွားတယ်။ ၃ ယောက်ကို Pacemaker နှလုံးခုန်စက် တပ်ပေးလိုက်ရတယ်။
ဒါကြောင့် Sofosbuvir နဲ့ Amiodarone ဆေးကို တွဲမသောက်ပါနဲ့။
• ပြင်သစ်ဆေးပညာရှင်တွေကနေ မျိုးဗီဇ စနစ်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ HIV ကူးစက်နေတဲ့ ယောက်ျား ၂ ယောက်မှာ အဲဒီနည်းနဲ့ အလိုလိုပျောက်သွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ၂၃-၃-၂ဝ၁၅ နေ့သတင်းကဆိုပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကနေ HIV-AIDS တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အထောက်အကူရလာပါလိမ့်မယ်။
• ပြင်သစ်မှာပဲ HIV ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကနေ တရားရုံးမှာ လျှောက်ချက်တင်ကြတယ်။ သူတို့ကို အတင်း သားကြောဖြတ်ခိုင်းလို့ လျှော်ကြေးရလိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးကနေ ကိုယ့်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို ကိုယ့်မှာ HIV ရှိနေတာကို ထုတ်ပြောဖို့ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဖူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
• ၁-၁၂-၂ဝ၁ဝ တုံးကပြဌာန်းထားတဲ့ HIV and AIDS Prevention and Control Act, No. 14 ဟာ အဲလို မညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပဲ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်တယောက်ရေးတင်ထားတာ ဖတ်ရတယ်။
ဆရာ ဝ လူမျိုး မြင်ဘူးသလား။ လမ်းပေါ်မှာ ကားသစ် မယားသစ်တွေနဲ့သွားနေတာပေါ့။ နိုး၊ နိုး။ အဲဒီလူတွေက တရုတ် အစစ်တွေပါ။ ဝ ဆိုတာ တောင်ပေါ်သားတွေ။ ကျိုင်းတုံစော်ဘွားပိုင်နယ် လူဦးရေ တသောင်း မပြည့်ဘူး။ အခု ကိုးကန့် ဝ အမည်ခံ တရုတ်တွေက လူဦးရေ ၅ သိန်းလောက်ရှိတယ်။ ဝ ဆိုတာ အသားမဲမဲ မျက်လုံးပြူးပြူး အရပ်ပုပု နာခေါင်း ပြားပြား။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း နာရွက်ကားကား။ အဲဒါ ဝ မှတ်ထားဟု ပြည်နယ်ဆရာဝန်ကြီး (ငြိမ်း) ကပြောပြသည်။ ကိုးကန့်နဲ့ ဝ စစ်စစ်တွေက တိုင်းရင်းသားလက်ခံပါတယ်။ အမည်ခံတရုတ်တွေကတော့ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ လာနေရင် မြန်မာဥပဒေကို လေးစားပါ။ ဥပဒေ မလိုက်နာချင်ရင်တော့ မနေနဲ့။့့
ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ရှမ်းခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်။ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ကို အစဆုံးထူထောင်သူ တယောက်ပေါ့။ အစည်းအဝေးတွေကို အတူတက်ကြရင်း သူကပြောတယ်။ သူတပ်ထောင်တော့ စစ်သားစုတဲ့အထဲမှာ ဝလူမျိုးတွေလည်း ပါသတဲ့။ တနေ့တော့ ခရီးထွက်ရင်း ရှမ်းပြည်ကိုတက်လာတဲ့ မီးရထားတစီးနဲ့တွေ့တော့ ဝတပ်သားတွေက ဟာ့့ ဘာကောင်ကြီးလည်းမသိဘူးဆိုပြီး ထွက်ပြေးကြပါသတဲ့။
ဒါပေမယ့်ဆရာ အဲတာက ဗခကနေဝင်း အာဏာသိမ်းပြီးစလောက်ကပါ။ ကနေ့တော့ ဝတပ်မှာ စစ်အင်အား ၃ဝဝဝဝ ရှိတယ်။ အရံအင်အား ၁ဝဝဝဝ ရှိတယ်။ ၂ဝဝ၈ Jane Intelligence Review အစီရင်ခံစာအရ တရုပ်ဟာ အဓိကလက်နက် ထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၁ အစီရင်ခံစာအရ တရုပ်ကနေ HN-5N Surface-to-air missile (SAMs) မြေပြင်မှဝေဟင်ပြစ်ဒုံးပျံ ဝယ်ထားတယ်။ ၂ဝ၁၄ အစီရင်ခံစာအရ FN-6 Surface-to-air missile ကိုပါ ဝယ်ထားပြီးပြီ။ ၂၉-၄-၂ဝ၁၃ အစီရင်ခံစာအရ Mil Mi-17 ဟယ်လီကော်ပတာတွေ ဝယ်ထားတယ်။ TY-90 air-to-air missiles လေယျာဉ်မှ ဝေဟင်ပြစ် ဒုံပျံတွေလည်း တရုပ်ဆီကပဲ ဝယ်ထားပါတယ်။
ဥပဒေကို ဆရာကထောက်ပြတယ်။ မှန်တော့ မှန်တာပေါ့ဗျာ။ ဥပဒေအထက်က ဝနေကြတဲ့သူတွေက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုထားတော့ ဥပဒေဆိုတာကြီးနဲ့ အဖိခံထားရလို့ ပြားနေရတဲ့လူတွေက ဘာပြောလို့ရမလည်းဆရာ။ ဝတဲ့သူပိန်အောင်လို့ ကယ်လိုရီတွေကို မီးရှီု့ပြစ်ရတယ်မဟုတ်လားဆရာ။